Kanzuru yeHarareYoronga Kuwanisa Vanhu Mvura Munguva Dzakasiyana
Kanzuru yeHarare inoti yatarisana nematambudziko akawanda munyanza iyi zvekuti ichatanga kugovera vanhu mvura mwedzi uno sezvo isisakwanise kuti mugari wese muguta awane mvura yakachena.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pachigayo chemvura cheMorton Jaffrey Water Works, VaPaul Chabata, vati mvura iri mudhamu yasviba zvakaipisisa nekuda kwetsvina inobva kuHarare nezvimbo dzakatenderedza guta iri izvo zvave kuita kuti kanzuru ishandise mari yakawanda pakuchenesa mvura iyi.
Vatiwo tsvina iyi inokonzerwawo nevanhu vanoredza hove zvisina mvumo mudhamu yave kukanganisa kanzuru pakupomba mvura.
Mabharani mukuru wekanzuru, Engineer Hosiah Chisangno, vati vari kukurudzira vagari kuchengetedza mvura uye kanzuru yavo ichatanga kugovera vanhu mvura kutanga mwedzi uno.
Vatiwo kunzuru ichavhara chigayo cheMorton Jaffrey mukupera kwesvondo kuitira kuti vabvise tsvina irimo uye izvi zvichawedzera huwandu hwemvura kubva pa 360 mega litres kusvika pa 450 mega litres pazuva.
Vagari vemuHarare vanoshandisa 800 mega litres muchando ne1200 mega litres panguva yezhizha pazuva rega rega.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance, VaHardlife Mudzingwa, vaudza Studio7 kuti havabvumirani nematanho ari kuda kutorwa nekanzuru ekugovera mvura vachiti zvichaita kuti vagari vabatwe nezvirwere.
VaMudzingwa vati kanzuru inofanira kutora mvura kubva kune mamwe madhamu akaita seDarwendale kuti mvura ikwanire munhu wese.
Muzvina bhizimisi vashanda padhamu iri kwenguva yakareba, VaGarry Stafford, vaudza Studio7 kuti kuzara kwejecha mudhamu kuri kukonzerwa nekurimwa kuri kuitwa mumatoro nedzimwe nzvimbo muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta uye zvakakosha kuti zvisaitwe kuti dhamu reChivero risaparare.
Vati dhamu iri range rakadzika mamita makumi maviri nemasere asi pari zvino rakadzika mamita gumi nemasere chete sezvo razara jecha.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti tsvina yakawanda iri kupinda muLake Chivero iri kukonzerwa nekanzuru yeHarare iyo iri kutadza kugadzirisa mapombi anotakura tsvina.
Nyanzvi idzi dzinoti kuendeswa kwetsvina isina kuiswa mishonga inodzora hukasha hwetsvina munzizi dzakaita seMukuvisi neManyame kuri kuwedzerawo kuipa kwemvura yemuLake Chivero.
Muna Kurume 2015 kanzuru yeHarare yakawanikwa nematare edzimhosva iine mhosva yekudira siweji muna Mukuvisi isina kucheneswa sezvinodiwa nemutemo ikafaindiswa zviuru zana zvemadhora ekuAmerica.
Kanzuru yeHarare yakabatwa nemhosva yekutyora mutemo weEnvironmental Management Act kuburikidza nekudira tsvina munzizi dzinoti Mukuvisi, Marimba, Ruwa neNyatsime, nzizi dzine mvura inopedzisira yapinda muLake Chivero.
Nyanzvi mukuvakwa kwemaguta dzinoti guta reHarare rakavakirwa panzvimbo isina kunaka sezvo riri munzvimbo inofamba nemvura inopinda muLake Chivero, izvo zvinoita kuti mvura iyi isvibe zvakanyanya.
Pari zvino guta reHarare rinoda mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora semari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwedzi wega wega.